Baidoa Media Center » Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo xarunta madaxtooyada ku qaabilay wefdi Qaramada midoobay ka socda.+Sawiro
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo xarunta madaxtooyada ku qaabilay wefdi Qaramada midoobay ka socda.+Sawiro
September 15, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Maanta Xafiiskiisa ku Qaabilay Wafdi ka Socda Jamciyada Quruumaha Ka dhxeysa kuwaasi oo maanta Soo gaaray Caasimada.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha jamhuuriyada Soomaaliya ayaa kulankan uu la qaatay xubna ka socday qaramada midoobay kuwaas oo uu hoggaaminayay kaaliyaha xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya antinomy burneury iyo saraakiil kale.
Waxaana kulanka uu ahaa mid albaabada u xeran oo saacada badan qaatay kaas oo inta uu socday lagu lafaguray arrimo u badnaa doorka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo hambalyeeynta Madaxweynaha jamhuuriyada fedaraalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Markii uu soo idlaaday kadib kulanka ayaa waxaa saxaafadda la hadlay kaaliyaha xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Antonym Burneury waxaana uuna sheegay in uu Madaxweyanaha hambalyo uga wada Baanki Moon mas’uuliyadda culus ee loo dhiibay isagoo xaqiijiyay in qaramada midoobay ay ku qanacsan tahay natiijadii ka soo baxday doorashadii uu ku guulaystay madaxweyne Xasan Sheekh.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha dalka oo 10-kii bisha lagu doortay magaalda Muqdisho ayaa waxaa tan iyo markaasi sii kordhaya taageerada iyo kalsoonida ay u hayaan bulshda Soomaaliyeed iyo kuwa caalamka taas oo fursad u siin doonto Madaxweynaha cusub in uu ku guulaysto xilka culus ee loo igmaday.